Converting videos ka mma format ma ọ bụ n'ime 3D na-akwụghachi ụgwọ. E nwere ọnụ ọgụgụ nke mmemme ị nwere ike iji, ụfọdụ nke ka ndị ọzọ mma, na ụfọdụ n'ime ndị na-adị mfe iji mee ihe karịa ndị ọzọ. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị kacha ndị na-eji, malite na Xilisoft.
Xilisoft 3D Video Ntụgharị Platinum bụ ihe dị mfe iji omume na-egbuke egbuke oyiyi na-eme ka navigation mfe. Ị nwere ike tọghata faịlụ na-ọzọ mfe eji na obere ngwaọrụ-egwu ya edekọ usoro. I kwaturu menus i nwere ike iji, ma ọ bụ ị nwere ike ịmepụta na gị onwe gị profaịlụ maka ndị akacha eji ntọala. E nwekwara Xilisoft Ultimate, nke adịghị abịa na ụfọdụ ndị edezi ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe a obere mfe. Platinum nwere video ọkpụkpọ otú ị pụrụ ịhụ ihe atụ nke gị video dị ka ị na-aga.
E nwere ndị ọzọ omume si n'ebe na nwere ike ime video akakabarede, kwa. Ka anya na iri n'ime ha.
1. Wondershare Video Ntụgharị
Wondershare Video Ntụgharị nwere ike tọghata ụfọdụ ihe ndị kasị nkịtị formats nke videos n'ime ọzọ na-ahụkarị formats, dị ka MPEG, AVI, MP4, na FLV. Ọ bụ ihe dị mfe iji omume na-eme ihe niile nke akakabarede atọ nzọụkwụ, ọbụna site 2D ka 3D (na Ultimate mbipụta). Ị nwere ike igwu azụ gị converted egwu iji jide n'aka na ọ bụ kpọmkwem ihe ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ nnọọ ọdịyo track si a video, ọ pụrụ ime na kwa. Gị audio track nwere ike converted n'ime a ọnụ ọgụgụ nke formats Ọzọkwa, dị ka M4A, WMA, na AAC. Ọ nwere ọcha interface na mfe okirikiri nhọrọ ukwuu, kwa.
2. Ọ bụla DVD Ntụgharị
Ọ dịghị n'ezie, nke ahụ bụ aha ya. Bipụtara Anvsoft, Inc., ọ na-eme a ọnụ ọgụgụ nke conversions, site DVD ka video, si video ọzọ format, na site na web ka a ebudatara video. N'ihi na nke mgbanwe, ọ na-akpata aha ya eme ihe n'eziokwu. Ọ na-akwado a ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ, na ọ nwere ike ire gị okokụre video ka DVD ma ọ bụ ndị ọzọ video diski maka playback na telivishọn. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe nnọọ ọdịyo kwụsịrị video track, ọ pụrụ ime na, kwa. Chọrọ dezie gị onwe gị videos? Ị pụrụ ime nke ọ bụla na DVD dị ka mma. Ọ nwere dị ọcha, Dịkwa n'Usoro interface maka ala nke iji. Ụzọ ya na Photo Flash Onye kere na ị pụrụ ime ka gị onwe gị na 3D slideshows na FLV videos.
Nke a na usoro e mere maka mmalite video nchịkọta akụkọ, featuring a Dọrọ na dobe interface na onye ọ bụla nwere ike iji. Ị na-adịghị melite ihe ọ bụla mbụ malite iji ya, ma ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike melite na ike gị onwe gị preset nhọrọ. Ọ na-ekwe ka ị na-azọpụta gị vidiyo na formats na nwere ike igwu azụ egwuregwu consoles, Apple TV, na smartphones. Ya otu drawback - e mere ya maka Mac. Ọ bụ a ngwa ngwa omume na a dịgasị iche iche nke nhọrọ maka izoputa. Permute nwere ike ijikwa a dịgasị iche iche nke formats na ya nwere ike tọghata oyiyi n'ime a video. A na usoro a eguzobekwarala ime 3D oyiyi ma ọ bụ vidiyo, ebe ọ bụ ndị ọzọ n'ihi na mbido, ma ọ bụ oké launching ebe.
4. Black Platinum
Nke a bụ aha ọhụrụ maka Nero Multimedia Suite. Nke a na usoro bụ otu n'ime ihe ndị kasị video omume dị maka Windows arụ ọrụ usoro. Ọ na-abịa na ụdị nile nke tinye-ons na ka ị na ike na ọkụ gị onwe gị discs, na-eme ka fim maka ekere òkè na internet. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị ekeghị video ke Nero, na-ere ọkụ software ka nwere ike na-elekọta authoring usoro. Ọ ọbụna na-abịa na a jaket e kere eke usoro, maka ọkachamara na-achọ DVD na i nwere ike na-ekesa. E nwere ihe a nnapụta omume nke pụrụ inyere gị naghachi na weghachite na nke e mbụ furu efu. Ka ọ bụla ọzọ mgbake omume, ọ bụghị ihe zuru okè, ma ọ nwere ike aka weghachi ụfọdụ udo nke uche. E nwekwara a video na ọdịyo edezi atụmatụ na ike ewepụtụ, mix, na mbupụ tracks. Ike na 2D ma ọ bụ 3D na-egwu azụ gị onwe gị Blu-Ray kere.
Nke a na usoro bụ n'ihi na ụfọdụ ndị ọzọ elu ọrụ, na ọ na-enyere aka na ngbanwe. Tinye ndepụta okwu na kasị nkịtị formats, fanye metadata, tinye isi, ma ọ na-eme ngbanwe. Ozugbo ị bụ zuru ezu, ị nwere ike bulite na weebụ, ma ọ bụ nyefee gị video ka a obere ọkpụkpọ ma ọ bụ egwu egwuregwu console. Ị nwere ike encode gị video na QuickTime ma ọ bụ FFMPEG na ọ niile mere n'ime usoro ihe omume - adịghị mmezi ngwa ibudata. The jụụ akụkụ banyere FFMPEG bụ na kasị nso-nso ntọhapụ-enye gị ohere encode na stereoscopic 3D na metadata. N'agbanyeghị ihe niile na atụmatụ ya ngwugwu na, ọ bụ ka ezigbo mfe iji, na ọ ejiri podcasting na akpaka uploads ka iTunes. Ọ na-atụmatụ video uploads na kasị nkịtị formats ma ọ bụ iji YouTube.
6. Doremisoft Video Ntụgharị
Dị ka aha ya na-egosi, ọ ejiri nile di iche iche nke video conversions iji kasị nkịtị formats. Ọ nwere ike na-ọkọlọtọ definition video na-atụgharị ya n'ime HD, ma ọ bụ ọ pụrụ ịnọgide na ya na SD format dị ka ihe .mp4, a MOV, a WMV, ma ọ bụ onye AVI faịlụ. Ya-enye gị iji tọghata videos maka playback on a dịgasị iche iche nke mobile ngwaọrụ, gụnyere blakberị, nke ọtụtụ omume na-adịghị. Ọ na-akwado ndị ọzọ obere ngwaọrụ-aba n'akpa uwe egwuregwu nkeji. Ị nwere ike nweta nkwalite gị 2D nkiri na 3D mfe - nanị ịgwa ya nke agba nke 3D ị chọrọ iji - ahụkarị acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ anụnụ anụnụ na-acha odo odo, ma ọ bụ ọbara ọbara na green. Kụrụ na-amalite na ị na na na ụzọ gị! Chọrọ ọdịyo egwu? Doremisoft nwere ike ime na, kwa. Ọ nwere ike na-eme ụfọdụ video edezi nwekwara dị ka cropping, nchapụta akara, na mmetụta. Ọ bụrụ na ị chọrọ Stitch faịlụ ọnụ ma ọ bụ na-screencaps, ihe niile ahụ dị na Doremisoft.
7. ImTOO Video Ntụgharị
Nke a dị ike omume nwere ike ijikwa converting ka a dịgasị iche iche nke obere ngwaọrụ, a obosara ọnụ ọgụgụ nke formats (150) tinyere DivX, .mp4, na FLV, gbakwunyere ya nwere ike tọghata 2D ka 3D. Screencaps, video mmetụta, na ikwu n'ụzọ niile bụ nhọrọ n'ime ImTOO. Chọrọ nweta ọdịyo track anya nke a video? Ọ nwere ike na-eme na, kwa. Ị nwere ike jikota videos ọnụ ma ọ bụ Stitch photos ọnụ ike ọhụrụ video. High definition vidio ndị na-ekwe omume n'ebe a. Ọ na atụmatụ onye na akpaaka nso atụmatụ na ike ịgbalite ozugbo faịlụ a mere converting.
8. GetGo Video Ntụgharị
Nke a na usoro bụ onye ọzọ na ikike tọghata kasị isi formats n'ime ọzọ obere usoro. Ọ nwekwara ike aka elu definition faịlụ. Na-arụ ọrụ ngwa ngwa gbapụrụ ọsọ, ọ na-adịghị achụ àjà foto àgwà na usoro. Otu pụrụ iche mma GetGo nwere na ọtụtụ ndị ọzọ adịghị eme bụ ụzọ iji ubi na nwa na ìgwè ndị agha na HD videos si otú gị obere ngwaọrụ ihuenyo dị nnọọ jupụtara nkiri. Ọ nwere ike na-faịlụ maka n'elu 3D ntị, na LG Optimus 3D na EVO 3D. Ị nwere ike sere kwụsịrị audio si video faịlụ na Ibu Ibu ha na obere ngwaọrụ. Mgbe ọ na-apụghị ime multi-tasking, ọ dịghị ekwe ka ị kwụ n'ahịrị elu ọtụtụ videos ozugbo na a ga-converted ozugbo ugbu a onye zuru ezu, na ị pụrụ ọbụna setịpụrụ ihe omume na-emechi ozugbo ha nile na-mere. GetGo adịghị nwere otutu edezi atụmatụ, ma ọ ekwe ka ị na ịgbanwe ihe dị ka ọdịyo na video bitrates.
9. Aviosoft 3GP Video Ntụgharị
Nke a Windows dabeere na omume na-kpọmkwem iji tọghata fọrọ nke nta ọ bụla usoro nke videos n'ime a format na dabara na ekwe ntị, na ụfọdụ, ọ na-eme ihe nkiri na elu definition. Ọ na-ekwe maka video clipping otú i nwere ike ịzọpụta ọkacha mmasị gị obere mkpachị na-egwu ha azụ na ekwentị gị. Ebe ọ bụ na faịlụ ndị bụ obere, Aviosoft nwekwara ike ime ogbe converting na ọ bụ a ngwa ngwa omume buut. Mepụta slideshows na iji ngosi mmịfe atụmatụ na i nwere ike tinye ruo 12 pụrụ iche utịp dị ka ị na-aga. E a preview nchịkọta akụkọ otú i nwere ike ịhụ ihe okokụre ngwaahịa ga-ele anya dị ka. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ mkpa ime ụfọdụ edezi, i nwere ike ime na, kwa, gụnyere tinye ndepụta okwu. Aviosoft abịa na a ikpe mbipute na ga-ekwe ka ị mepụtara a obere atọ-nkeji video for free.
N'agbanyeghị ihe ị na mkpa ya maka, e nwere dịkarịa ala a iri na abuo ezi video akakabarede omume site nke ịhọrọ. Nke otu onye bụ nri maka gị? Ụfọdụ n'ime ya na-adabere na gị sistemụ, ụfọdụ n'ime ya na ngwaọrụ i bu n'obi na-egwu gị vidiyo na, na ụfọdụ na okirikiri nhọrọ ukwuu nke usoro ihe omume onwe ya na ma ọ ga-arụ ọrụ maka gị mkpa. Were ụfọdụ n'ime ikpe nsụgharị maka a ule mbanye na-ahụ ma ọ bụrụ na ha uwe. Ma ọ bụ i nwere ike ịchọ a usoro dị ka Wondershare na nwere ọtụtụ ihe nwere ike na ọtụtụ dakọtara ndapụta na ị gaghị na-agba n'ime esemokwu. Ihe ọ bụla ị na-ahọrọ, na-egwu gburugburu na ya na nwere ụfọdụ fun!
Olee otú iji tọghata M2TS ka MPEG on Windows / Mac OS
Olee otú bulite MP4 ka YouTube effortlessly
Olee otú iji tọghata VOB ka WMV na ala
> Resource> tọghata> Top Nine Xilisoft 3D Video Ntụgharị Alternatives